Ingxowa Machine, Vuvu Machine, yezihlangu Cover Machine - Fangyong
Speed ​​High oluzenzekelayo ezilahlwayo Vuvu Ukwenza Mac ...
TPE isikhuseli Ukwenza Machine
XT350 Isihlangu Cover Ukwenza Machine
Double Line Core Inkunkuma Ingxowa Ukwenza Machine
I-DFR380 i-T-shirt ye-Double Line yokwenza umatshini
Flower Bag Ukwenza Umatshini
Umatshini wokwenza ibhegi yengubo
Umatshini wokukhupha i-LM1300
I-CLFQ1300 Umphezulu wokuSonga umatshini wokuqhawula
I-GSFQ1300A ngokuzenzekelayo isantya sokuqhawula umatshini
WF1600 Non womluki uqhoqhoqho umatshini
Oluzenzekelayo Dog Poop Bag Ukwenza Machine
DRQ600-1000 Ubushushu Cutting Side ukutywina Machine
SLD1300 uqhoqhoqho Machine
Umatshini wokuprinta weYTG600-1300
Umatshini wokutywina weZF350
Umatshini wokuTywina oPhezulu weHZ300
Umatshini wokusika we-QD350
LH500 Paper Core Ukucanda Matshini
Umatshini wokuprinta we-YTZ600-1300
ZUA400-600 ezintathu Side Ukutywina Bag Ukwenza Machine
GM1100-1900 iServo yokuLawula iSantya esiPhezulu seShedt ...
zoba umatshini wokwenza ibhegi yenkunkuma
URuian Fangyong Machinery Factory ngumenzi onobuchule bokupakisha oomatshini beplastiki njengoomatshini wokwenza ibhegi yenkunkuma, ukutywina ngapha nangapha umatshini wokwenza ibhegi, umatshini wokwenza ibhegi, umatshini wokwenza imaski, umatshini wokwenza iglavu, umatshini wokhuseleko wezihlangu, umatshini wokwenza ishawa, umatshini obuyela umva, umatshini wokusika kunye nabanye oomatshini abazalanayo.
Sikhoyo eRuian, kwisiXeko saseWenzhou, kwiphondo laseZhejiang eli-1 ngeyure ukusuka eShanghai okanye iiyure ezimbini ukusuka eGuangzhou.
Xa usebenzisa umatshini uqhekeza imveliso ...
Xa usebenzisa umatshini wokuqhekeza kwimveliso, inkqubo yokuqhekeza kufuneka ihlawulwe kwaye ayimele ithathwe kancinci. Ke ngoko, eli nqaku liza kudibanisa ifilimu edityanisiweyo ye-BOPP / LDPE, iingxaki zomgangatho ezenzeka kwinkqubo yokuqhekeza kunye neengxaki ezinxulumene nomatshini wokuqhekeza. 1. Lawula isantya sokusika Xa ungena kwimveliso yesiqhelo ...
Xa usebenzisa umatshini wokuqhekeza kwimveliso, inkqubo yokuqhekeza kufuneka ihlawulwe kwaye ayimele ithathwe kancinci. Ke ngoko, eli nqaku liza kudibanisa iBOPP / LDPE c edityanisiweyo ...
Ubushushu ukusika ulawulo lobushushu ngexesha b ...
Kwinkqubo yokwenza ibhegi, ngamanye amaxesha ukutywinwa kwengxowa akulunganga kangako. Iimveliso eziveliswe ngale ndlela azifanelekanga. Yintoni ebangela le meko? Kufuneka sinikele ingqalelo cutter ubushushu te ...